जाकार्ताबाट उडेको ४ मिनेटमै दु’र्घटनाग्रस्त विमानमा रहेका सबै ६२ जनाको नै मृ’त्यु – Wow Sansar
जाकार्ताबाट उडेको ४ मिनेटमै दु’र्घटनाग्रस्त विमानमा रहेका सबै ६२ जनाको नै मृ’त्यु
January 11, 2021 58
इण्डोनेसियाका अधिकारीहरुले बोइङ ७३७ विमान दु’र्घटना भएपछि समुद्रमा मानव शरीरका टुक्रा र विमानका टुक्राहरु भेटिएको बताएका छन् । रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार दुर्घ’टनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्सबाट केही संकेत पनि प्राप्त भएका छन् । शनिबार राजधानी जाकार्ताबाट उडेको ४ मिनेटमै राडारसँगको सम्पर्कबाट विच्छेद भएको विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।
विमानमा ५० जना यात्रु र १२ जना क्रु सदस्य गरी ६२ जना थिए । इण्डोनेसियाको सर्च एण्ड रेस्क्यू एजेन्सी प्रमुख बगुस पुरुहितोका अनुसार २ स्थानबाट संकेत प्राप्त भएका छन् जो विमानको ब्ल्याक बक्सबाट आएको हुन सक्छ । समुद्रमा भेटिर्एका मानव अवशेषको पहिचान प्रमाणित गर्न अस्पताल पठाइएको छ । रिपोर्टका अनुसार विमान २६ वर्ष पुरानो थियो । यसअघि २०१८ को अक्टोबरमा पनि इण्डोनेसियाको लायन एयरको विमान दुर्घटना भएको थियो जसमा १८९ जना मारिएका थिए ।
विमानमा ५० जना यात्रु र १२ जना क्रु सदस्य गरी ६२ जना थिए । इण्डोनेसियाको सर्च एण्ड रेस्क्यू एजेन्सी प्रमुख बगुस पुरुहितोका अनुसार २ स्थानबाट संकेत प्राप्त भएका छन् जो विमानको ब्ल्याक बक्सबाट आएको हुन सक्छ । समुद्रमा भेटिर्एका मानव अवशेषको पहिचान प्रमाणित गर्न अस्पताल पठाइएको छ । रिपोर्टका अनुसार विमान २६ वर्ष पुरानो थियो । यसअघि २०१८ को अक्टोबरमा पनि इण्डोनेसियाको लायन एयरको विमान दुर्घटना भएको थियो जसमा १८९ जना मारिएका थिए
Prevचीनमा फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना, कति थपिए नयाँ संक्रमित ?
Nextदाजु-भाईले दिदि-बहिनी नै विवाह गरेर घर ल्याए, रातको १ बजे जे भयो थाहा पाउँने जो कोही चकित !
डिभोर्सको ८ वर्षपछि पूर्वश्रीमान् बिते, उनले १३ दिने किरिया गरिन्
विबाहपछि झनै मालामाल श्वेता, छिन् निकै खुशी, किनिन् १ करोडको गाडी हेर्नुहोस् भिडियो
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3267)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1304)